किम जोङ उनको यस्ता कडा नियम, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ ! – News Nepali Dainik
किम जोङ उनको यस्ता कडा नियम, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ !
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०८, २०७७ समय: ६:४७:१८
उनका बुवाले आफ्नी श्रीमतीहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित गराउने गरेका थिएनन्। म्याडन भन्छिन्, “यो नयाँ कुरा नै हो किनकि रि सोल-जुलाई उत्तर कोरियामा आमाको स्थान दिन थालिएको छ।”
उत्तर कोरियाको सत्तारुढ परिवारबारे अवलम्बन गरिने गोपनीयताका कारण किम जङ-अनका सन्तानको संख्याबारे पनि वास्तविक जानकारी छैन। दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायका अनुसार रि सोल-जुले गत फेब्रुअरीमा तेस्रो बच्चा पाएकी थिइन् तर बच्चाको लिङ्ग र नामबारे केही थाहा हुन सकेको छैन।
”पहिलाेचोटि मैले यी दुई तन्नेरी राजकुमारहरूलाई भेट्दा उनीहरू दुवै जना सैन्य पाेसाकमा थिए। उनीहरूले पालैपालाे सबै कर्मचारीसँग हात मिलाए। मसँग हात मिलाउने पालाे आउँदा राजकुमार किम जङ-अनले मलाई एकटकले हेरे।
त्याे ‘तिमीजस्ता जापानीलाई हामी घृ’णा गर्छौँ’ भन्न खाेजिएजस्ताे थियाे। सातवर्षे बालककाे त्याे बिझाउने हेराइ म कहिल्यै बिर्सिन्नँ।” सन् २००३ मा प्रकाशित आफ्नाे दाेस्राे पुस्तकमा फुजिमाेताेले लेखेका छन्:
“किम जङ-चललाई सबैभन्दा सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिन्छ। तर त्यसबारे मलाई श’ङ्का लाग्छ। किम जङ-इल भन्ने गर्थे, ‘जङ-चल उपयुक्त छैनन्, उनी केटीजस्ता छन्।’ कान्छा छाेरा अर्थात् दाेस्रा राजकुमार उनका लागि प्रिय छन्। जङ-अन धेरै किसिमले बुवाजस्तै छन्।
Last Updated on: March 21st, 2021 at 6:47 am